Ihe 9 iji hụ ma mee na Toulouse | Akụkọ Njem
Ihe 9 iji hụ ma mee na Toulouse
Susana Garcia | | Obodo, General, Toulouse
Toulouse bụ isi obodo nke Upper Garonne na obodo nke anọ kachasị na France, na-eme ka ọ bụrụ otu n'ime ebe ndị kwesịrị ịnwe ezumike izu ụka. Toulouse, dị ka obodo ndị ọzọ dị na France, jupụtara na amara na ebe ọdịbendị, ebe ngosi ihe mgbe ochie na ihe ncheta ma ọ bụ ụlọ iji hụ. Ya mere, anyị mepụtara obere ndepụta na ụfọdụ n'ime ihe ịhụ na Toulouse.
Enwere ihe ndị ihe ijuanya sitere na Toulouse, a makwaara ya dị ka obodo pink n'ihi na ọtụtụ ụlọ ya ji brik rụọ. Taa ọ na-ejigide ọtụtụ amara na akụkụ ochie ya mana ọ nwere ikuku na-ekpo ọkụ n'ihi eziokwu ahụ bụ na a na-ahụta ya obodo mahadum, yabụ anyị ga-ahụ obodo dị egwu, ma ehihie na abalị.
1 Ebe du Capitole
2 Capitol ma ọ bụ Halllọ Nzukọ Obodo nke Toulouse
4 Basilica nke Saint-Sernin
5 Ebe obibi ndị Jacob
6 Katidral Saint-Etienne
7 Ugbo maka ije
8 Obere nka
9 Oghere Obodo
Ebe du Capitole
Mgbe anyị ruru Capitol Square anyị rutere na obi nke obodo Toulouse. A rutere ya site na akụkụ ndị ochie nke mpaghara ochie, ịchọta nnukwu square ebe Kansụl Obodo dị. N'ebe a ka ihe omume kachasị mkpa nke obodo na-ewere ọnọdụ, yana site n'oge ruo n'oge ị nwere ike ịchọta ahịa n'okporo ámá na ụdị ngwaahịa ọ bụla, ihe dị mma maka ndị njem nleta. Ọ bụrụ na anyị chọrọ ịkwụsị na nleta anyị, anyị nwere ike ịkwụsị na ụfọdụ nke kpochapụwo cafes na square na-enwe ikuku nke obodo.
Capitol ma ọ bụ Halllọ Nzukọ Obodo nke Toulouse
Capitol ma ọ bụ Halllọ Nzukọ Obodo bụ ụlọ kachasị mkpa na square. N'ime ya bụ Isi ụlọ ọrụ obodo site na obodo na Capitol aterlọ ihe nkiri. Ọ bụ ụlọ e wuchara na narị afọ nke XNUMX ma maa mma ma n'ime ma n'èzí. N'ime ị nwere ike ịmasị ọnụ ụlọ ya, chọọ ya mma na ụdị kpochapụ, ma ntinye bụ n'efu. N'ime ụlọ ị nwere ike ịnụ ụtọ frescoes na mgbidi na ụlọ, lee steepụ ma gaa na Hall of the Illustrious na ụlọ Henri Martin, nke ihe osise a sere.
Nke a bụ otu n’ime ihe ndị mara mma ma maa mma n’okporo ámá n’obodo ahụ. N'ime ya enwere obere ụlọ ahịa na ụlọ nri iji nwee ọ enjoyụ na ọnụnọ gị. E nwere set nke acha ụlọ n'okporo ámá na-eduga kpọmkwem na Plaza del Capitolio.
Basilica nke Saint-Sernin
Na Toulouse enwere ọtụtụ ụlọ okpukpe ị ga-eleta. Na Basilica Romanesque nke Saint-Sernin A na-edo ya onwe ya nye onye nwụrụ n'ihi okwukwe ya, ụbọchị mbido ya sitere na narị afọ nke iri na otu na nke iri na abụọ, ebe ọ bụ otu n'ime nnukwu ụka Romanesque dị na ndịda France. N'ime gị ị nwere ike ịnụ ụtọ ikuku mara mma na ụlọ dị mfe, dị ka ụdị ndị Romanesque, nwere akụkụ nke narị afọ nke XNUMX mara mma. Nwere ike ịbanye n'efu, ọ bụ ezie na ị ga-akwụ ụgwọ ịbanye iji hụ ihe onwunwe nke San Saturnino.
Ebe obibi ndị Jacob
El ebe obibi ndị nọn nke ndị Jacobins Ọ bụ ụlọ ọrụ okpukpe ndị ọzọ dị mkpa n'obodo ahụ. Ebe obibi ndị nọn a dị mfe na mpụga ma maa mma nke ukwuu n'ime, na-eju ndị niile na-abanye n'ime ya anya. O nwere otu eriri na ogidi dị n'etiti, nke nwere arches nwere agba iji kwado vaults. N'elu mgbidi ị nwere ike ịhụ eserese nke oge ochie na ebe ịchụàjà dị n'etiti ebe obibi ndị nọn ahụ, ọ bụghị na njedebe. Obi abụọ adịghị ya na ọ bụ iwu okpukpe nke nwere àgwà pụrụ iche.
Katidral Saint-Etienne bụkwa ebe a ga-eleta, nke mere obodo a ji nwee ụlọ okpukpe mara mma. Na katidral na-agwakọta ụdị Romanesque na Gothic, ma na-agwakọta brik na nkume na-ewu ya. Echefula na brik na-acha uhie uhie bụ akụkụ nke ọtụtụ ụlọ na obodo a, n'ihi na a na-eji ụrọ gbakọtara na ala Osimiri Garonne.
Ugbo maka ije
Toulouse bụkwa obodo nke nwere ọtụtụ ndụ ndụ. Egosiputa ihe ọmarịcha Ogige ndị Japan. Ugbo a nwere ụdị Asia na-enweghị mgbagha, ọ na-atọkwa ụtọ ịgagharị na ya. E nwere ubi ndị ọzọ dị mkpa n’obodo ahụ, dị ka Jardin du Grand Rond ma ọ bụ Jardin Pierre Goudouli. Nke a bụ ụzọ ị ga-ezumike n'etiti ileta obodo ahụ.
N’obodo a enwere ọtụtụ ebe ngosi ihe mgbe ochie enwere ike ịga leta iji mụtakwuo banyere obodo ahụ na isiokwu ndị ọzọ. Na Saint Raymond Museum a kọrọ akụkọ ihe mere eme nke obodo ahụ na Museum nke Angustinos ị nwere ike ịhụ eserese na ihe osise site n'oge dị iche iche. Ablọ oriri na ọ Lesụ Lesụ nke Les Ọ bụ ụlọ ngosi ihe nka nke nka nka na ebe ngosi.
Na Toulouse na ụlọ ọrụ aerospace, ya mere ị nwere ike ịga na nnukwu ogige ntụrụndụ nke Obodo Space. Ebe ị nwere ike ịnụ ụtọ mbara ala abụọ, amụma na isiokwu niile nke ụlọ ọrụ nke nyere mmadụ ohere iru ohere.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » General » Ihe 9 iji hụ ma mee na Toulouse
Puente del Pilar enye: Flight na nkwari akụ na London maka naanị 320 euro
Airbus A380, nke kachasị ukwuu